Cerebral Circulatory Disorders (ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cerebral Circulatory Disorders (ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ )
Cerebral Circulatory Disorders (ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ) ကဘာလဲ။
ဦးနှောက်သွေးကြောဆိုသည်မှာ သင့်ဦးနှောက်အတွင်း စီးဆင်းနေသောသွေးကို ဆိုလိုသည်။ ကျန်းမာသော ဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ် လုပ်နိုင်ရန်အတွက် သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
လှည့်ပတ်နေသောသွေးများသည် သင့်ဦးနှောက်အား လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလုပ်နိုင်ရန် အောက်စီဂျင်နှင့် အာဟာရများကို ထောက်ပံ့ပေး၏။ သွေးသည် ဦးနှောက်ဆီသို့ အောက်စီဂျင်နှင့် ဂလူးကို့စ်ကို ထောက်ပံ့ပေး၏။ ဦးနှောက်သည့် သင့်ခန္ဓါကိုယ်အလေးချိန်၏ အပိုင်းသေးသေးလောက်သာ ရှိသော်လည်း လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ရာ စွမ်းအင်အများကြီးလို၏။ အရီဇိုးနားတက္ကသိုလ်ရှိ ဒေးဗစ်ဓါတ်ခွဲခန်းအရ နှလုံးသွေးပန့်နှုန်း၏ ၁၅ %သည် ဦးနှောက်၏ အောက်စီဂျင်နှင့် ဂလူးကို့စ်လိုအပ်ချက်ကို ထောက်ပံ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
တခြားနည်းဖြင့်ပြောရလျှင် ၎င်းကျန်းမာနေစေရန် သွေးအမြောက်အများလိုအပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဦးနှောက်၏ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ဖို့ရာ လိုအပ်သည့်ပမာဏကို မထောက်ပံ့နိုင်တော့အောင် သွေးစီးဆင်းမှု မလုံလောက်သည့်အခါမျိုးရှိတတ်သည်။
ထိုအခြေအနေသည် အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့မှု မလုံလောက်ဖြစ်စေပြီး ဦးနှောက် Hypoxia ရနိုင်သည်။ ထိုကနေမှ ဦးနှောက်တစ်ရှူးများ သေခြင်း (cerebral infarction) သို့မဟုတ် တစ်ရှူးသေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော လေဖြတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဒါကို သိပ္ပံပညာရှင်များက ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများဟု ခေါ်ပါသည်။
Cerebral Circulatory Disorders (ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါသည် အရွယ်မရွေး လိင်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် အသက်ငါးဆယ်ကျော်သော အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များသည်။
Cerebral Circulatory Disorders (ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုအား တစ်ချို့အချက်များမှ ဖျက်စီးသည့်အခါ အောက်စီဂျင်နှင့် ဂလူးကို့စ်အား ဦးနှောက်မှ ကောင်းကောင်းမရတော့ပေ။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ၎င်းသည် ဦးနှောက်ထိခိုက်မှုကိုဖြစ်စေပြီး အာရုံကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။ ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု မလုပ်လောက်သည်နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော အခြေအနေတစ်ချို့မှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
ဦးခေါင်းသွေးလွှတ်ကြောအတွင်း၌ သွေးခဲပိတ်သွားလျှင် လေဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ထိုသွေးကြောထောက်ပံ့သည့် ဧရိယာတွင် ဦးနှောက်တစ်ရှူးများ သေသွားနိုင်သည်။ တစ်ရှူးသေသည့်အခါ ၎င်းဦးနှောက်အပိုင်းမှ ထိန်းချုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ ပျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် စကားပြောနိုင်စွမ်း၊ လှုပ်ရှားမှုနှင့် မှတ်ဉာဏ်တို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
ဦးနှောက်တစ်နေရာတွင် အောက်စီဂျင်မလောက်လျှင် ဦးနှောက်အောက်စီဂျင်မလောက်ခြင်း (Cerebral Hypoxia) ရနိုင်သည်။ ၎င်းအခြေအနေသည်သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းနေလျှင်သော်မှသွေးထဲတွင်အောက်စီဂျင်လုံလုံလောက်လောက်မပါဝင်သည့်အခါတွင်လည်းဖြစ်တတ်ပါသည်။
ဦးနှောက်သွေးယိုခြင်းသည် ဦးခေါင်းအတွင်း သွေးယိုခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် သွေးလွှတ်ကြောနံရံများအားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက သွေးများကို ဦးခေါင်းတွင်းသို့ စီးဆင်းစေနိုင်သည်။ ထိုအခါတွင် ဦးခေါင်းခွံအတွင်း ဖိအားများလာပြီး သတိမေ့သွားနိုင်ပါသည်။
ဦးနှောက်သွေးယိုခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သော တခြားအကြောင်းများမှာ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ဖြစ်ပေါ်နေသော သွေးကြောများ၊ သွေးယိုစီးသော ရောဂါများနှင့် ခေါင်းထိခိုက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဦးနှောက်သွေးယိုခြင်းသည် ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်းနှင့် သေခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးပညာအရ အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်သည်။
Edema (ဖောင်းကြွခြင်း)ဆိုသည်မှာ ရေဆန်သော အရည်များ စုစည်းခြင်းကြောင့် ဖောင်းလာခြင်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ဦးနှောက်ဖောင်းကြွခြင်းသည် ဦးခေါင်းခွံအတွင်း အရည်များ များလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုအား နှောက်ယှက်မှုရှိလျှင် ဒါမျိုးဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဦးနှောက်ဖောင်းကြွခြင်းသည် ဦးနှောက်ကို ဖိအားပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အချိန်မှီမကုသပါက ဦးနှောက်ဖိမိပြီး ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
စောလျှင်စွာသိရှိခြင်းနှင့် ကုသမှုသည် ဒီလိုအခြေအနေများ ပိုဆိုးလာခြင်းနှင့် နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်သော အရေးပေါ်အခြေအနေများကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြင်းထန်သော အခြေအနေများ မဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ဆရာဝန်နှင့် တတ်နိုင်သလောက် မြန်မြန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Cerebral Circulatory Disorders (ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများသည် တခြားသော ရောဂါများ သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်မှုများနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ Sickle cell anemia, သွေးကြောဖိမိခြင်း၊ နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်းခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း၊ သွေးကြောများတွင် ချပ်ပြားများ တည်ခြင်း၊ သွေးခဲများတည်ခြင်း၊ နှလုံးဖောက်ခြင်းကြောင့် သွေးပေါင်ထိုးကျသွားခြင်း၊ မွေးရာပါ နှလုံးမကောင်းခြင်း စသည်တို့ရှိသောလူများသည် ကျန်းမာသောသူများနှင့်ယှဉ်လျှင် ဤရောဂါကို ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ချေ အလွန်များသည်။
Siclke cell anemia
၎င်းသည် ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သည့် သွေးနီဥ ပုံစံဆန်းများနှင့် ဆက်နွှယ်ပါသည်။ တံစဉ်းပုံစံ သွေးဆဲလ်များသည် ပုံမှန်ဆဲလ်များထက် သွေးပိုခဲစေနိုင်ပြီး ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုကို ဟန့်တားစေနိုင်ပါသည်။
၎င်းသည် ဦးနှောက်ဆီသို့ အောက်စီဂျင်ပို့သော သွေးကြောများကို ပိတ်ခြင်းအားဖြင့် ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကင်ဆာအကျိတ်များသည် သွေးကြောဖိစေနိုင်သော အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခြု့ဖစ်သည်။
၎င်းသည် နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်းကိုဆိုလိုပြီး နှလုံးကိုလုံးဝရပ်သွားစေနိုင်ကာ အောက်စီဂျင်စီးဆင်းမှု ရပ်တန့်သွားစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်းသည် သွေးခဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေရာမှ အင်္ဂါများ အောက်စီဂျင် ပြတ်လပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
၎င်းသည် သွေးမလုံလောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ချပ်ပြာစုပုံမှု နည်းလျှင်တောင်မှ သွေးကြောကျဉ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး သွေးခဲမှုကို ပိုပိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သွေးခဲကြီးများသည်လဲ သွေးစီးဆင်းမှုအား ပိတ်ဆို့ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
၎င်းသည် နှလုံးဖောက်ခြင်းနှင့် သွေးပေါင်ကျခြင်းကြား ဆက်စပ်မှုကြောင့် ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ သွေပေါင်အလွန်ကျခြင်းသည် တစ်ရှူးများဆီသို့ လုံလောက်သောအောက်စီဂျင် ရောက်မည်မဟုတ်ပါ။
နှလုံးဖောက်ခြင်းအား မကုသလျှင် သွေးစီးမှုကိုကျသွားစေပြီး သွေးခဲများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကာ ဦးနှောက်နှင့် တခြားအရေးကြီးသည့် အင်္ဂါများကို သွေးမလျှောက်ပဲနေပါလိမ့်မည်။ ဆေးလွန်ခြင်းနှင့် ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမှ သွေးပေါင်ထိုးကျခြင်းလဲ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများသည် နှလုံးဖောက်ခြင်းအပြင် တခြားအကြောင်းများမှလဲ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
မသင့်လျော်သောသွေးကြော ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် ဆက်နွှယ်မှုများကြောင့် သွေးမလုံလောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ မွေးရာပါနှလုံးချို့ယွင်းသူများသည် သွေးခဲဖြစ်ပေါ်ဖို့ အလွန်လွယ်ကူနိုင်သည်။
Cerebral Circulatory Disorders (ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများများသည် အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ အောက်ပါတို့ရှိလျှင် သင့်၌ အန္တရာယ်ပိုများနေပြီ ဖြစ်သည်။
Cerebral Circulatory Disorders (ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်၌ ထိုအခြေအနေရှိနေကြောင်း သံသယရှိပါက ဆရာဝန်သည် စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပြီး ကျန်းမာရေးရာဇဝင်တို့ကိုမေးပါလိမ့်မည်။ စစ်ဆေးမှုတစ်ချို့ကိုလဲ လုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင့် လမ်းညွှန်နိုင်သည်။ တစ်ချို့ စစ်ဆေးနေကျ စစ်ဆေးမှုများတွင် သွေးစစ်ခြင်း သို့ ဓါတ်မှန်တို့ကဲ့သို့ ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးများပါဝင်ပါသည်။
Cerebral Circulatory Disorders (ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Alteplase (tpa) သည် ဦးနှောင်သွေးမလောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် လေဖြတ်ခြင်းအတွက် အသုံးဝင်သော ဆေးဖြစ်သည်။ ၃နာရီအတွင်းပေးနိုင်ပါက tpa နှင့်ကုသမှုသည် ဆေးတု (Placebo) များနှင့် ကုသသည်ထက် ပိုကောင်းသောအခြေအနေ ရနိုင်ချေ ပိုများပါသည်။
ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ၏ ရလဒ်သည် နောက်ပိုင်းတွင် အထောက်အပံ့ကုသမှု အရည်အသွေးပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ စနစ်တစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ သွေးဖိအားအား ထိန်ထားနိုင်မှ ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုအား ပြန်ကောင်းစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ အောက်စီဂျင်မဝခြင်း (hypoxia) နှင့် hypercapnia တို့ကိုလဲ ရှောင်ကျဉ်သင့်သည်။
အတက်ရောဂါသည် ထိခိုက်မှုကို ပိုများစေသည်။ သင့်တော်သော် အတက်ကျဆေးများကို ပေးသင့်ပြီး အတက်ရောဂါ ဖြစ်လာပါက ကုသမှုပို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သွေးတွင်သကြားဓါတ်များခြင်းကိုလဲ ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်းအား လျော့ချနိုင်ရန်နှင့် ဦးနှောက်နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန် အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာသင့်သည်။
သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုကို ကုသပါ
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်သော အစားအစာများ – သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ဂျုံကြမ်း
Cerebral circulatory disorders. http://www.healthline.com/health/vertebrobasilar-circulatory-disorders . Accessed January 3, 2017.
Cerebral circulatory disorders . https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_ischemia . Accessed January 3, 2017.
Cerebral circulatory disorders . https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebrovascular_disease . Accessed January 3, 2017.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇွန် 21, 2018